အချစ်ရေး Archives - Lupyo News
တကယ် မချစ်ဘဲနဲ့ ချစ်ဟန်ဆောင်ပြီး တစ်ဖက်သားကို အရူးမလုပ်မိပါစေနဲ့ .//
ကိုယ့်ရဲ့  CRUSH က ကိုယ့်ကို ပြန်ပီး CRUSH နေပီဆိုတာ သိသာနေတဲ့ လက္ခဏာ (၁၀)မျိုး
ကိုယ့်ရဲ့  CRUSH က ကိုယ့်ကို ပြန်ပီး CRUSH နေပီဆိုတာ သိသာနေတဲ့ လက္ခဏာ (၁၀)မျိုး ကိုယ့်ရဲ့ crush က ကိုယ့်ကို ပြန်ကြိုက်နိုင်မလားဆိုတာ သူ့ဆီမှာ တွေ့ရတဲ့ လက္ခဏာ တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က ကြိတ်ပြီးသဘောကျနေရတဲ့သူ၊ ချစ်နေရတဲ့သူ ကိုယ့်ပြန်ပြီး သဘောကျလာစေချင်တာ အားလုံး ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒဖြစ်မှာပါ။ ဆန္ဒပြည့်ဝခဲ့သူတွေရှိသလို မပြည့်ဝခဲ့သူတွေလည်း ရှိခဲ့မှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ crush က ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီး သဘောကျနေသလားဆိုတာ အခုဖော်ပြမယ့် အချက် (၁၀) ချက်ကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ် ဒီအချက်တွေ တွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့ ဖွင့်ပြောဖို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့တော့။ ၁။ သင်က တခြား ယောက်ျား လေးတွေ၊ မိန်းကလေး တွေနဲ့ ရှိနေ၊ … Read more
တစ်သက်လုံး စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ ဒီလိုလူမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ….
တစ်သက်လုံး စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ ဒီလိုလူမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ…. လောကမှာ အချစ်နဲ့လူတိုင်း မကင်းနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ မရပြန်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်တွဲတော့မယ်ဆိုရင် အချစ်တစ်ခုတည်းကို ကြည့်လို့မရသလို၊ ရေရှည်မှာ အဆင်ပြေနိုင် မပြေနိုင်ဆိုတာကလည်း တကယ်ကို အရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် အရာလေးတွေကတော့ သင့်ဘဝအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်မှာ ရှိနေရမယ့် အကျင့်စာရိတ္တတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ (၁) နားလည်မှုရှိရမယ်” လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်လို့ မရပါဘူး။ ရေရှည်တည်တံ့ပြီး၊ ရှေရှည်အဆင်ပြေဖို့ဆိုတာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ နားလည်မှုရှိမှ ရပါမယ်။ နားလည်မှုရှိတဲ့ယောကျားဆိုတာ သင့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇ၊ စိတ်နေစိတ်ထား၊ သင်ရဲ့အမူအကျင့်အားလုံးကို သေသေချာချာသိထားပြီး နားလည်ပေးတဲ့ သူမျိုးကိုသာ ရွေးချယ်ပါ …။ (၂) ရင့်ကျက်တဲ့သူ” ရင့်ကျက်တယ်ဆိုတာ အသက်ငယ်တာ၊ … Read more
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်မိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ (၁၀)ချက်
သင့်ကို သူ ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်ပြီး အလေးအနက်ထားကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့ စကားလုံးများ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုယ် ဘယ်လောက်ချစ်တယ်၊ ဘယ်လိုချစ်တယ်ဆိုတာကို သူ့ရဲ့ အပြောအဆို၊ အပြုအမူလေးတွေနဲ့ သင့်ကို ဆက်ဆံတဲ့ ပုံစံတွေကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေ သူ သင့်ကို ဆုံးရှုံးရမှာကို ကြောက်ပြီး အလေးအနက်ထားတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ ငါ မင်းမရှိပဲ အသက်မရှင်နိုင်ဘူး အိုး ဒီစကားက ကြားရုံနဲ့တင် ချစ်သူကောင်မလေးတွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို အရည်ပျော်ကျသွားစေမယ့် စကားလုံးမျိုးပါ။ ဒီစကားကို တော်ရုံယောကျာ်းလေးတွေက ထုတ်ဖော်မပြောတတ်ကြပေမယ့် သင့်ချစ်သူက သင့်ကို ပြောလာခဲ့ရင်တော့ ဒါဟာ သူ သင့်ကို ဘယ်လိုမှ ဆုံးရှုံးမခံနိုင်လို့၊ ဆုံးရှုံးရမှာ ကြောက်လို့ ခုလိုထုတ်ပြောတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့ရဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးကို မင်းနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းချင်တယ် ဒီစကားမျိုးက … Read more
“ချစ်သူကို အရမ်းချစ်ပေမယ့် မဆိုးပဲလည်းမနေနိုင်တဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့အမူအကျင့်(၅)မျိုး…”
“ချစ်သူကို အရမ်းချစ်ပေမယ့် မဆိုးပဲလည်းမနေနိုင်တဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့အမူအကျင့်(၅)မျိုး…” တစ်ချို့ကောင်မလေးတွေဟာ သူတို့ချစ်သူကောင်လေးအပေါ် အမြဲတမ်းလိုလို ဆိုးကြပါတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ တစ်ခါတလေ နောင်တရမိပေမယ့် ချစ်သူအပေါ်မဆိုးပဲလည်း မနေနိုင်ကြ ပြန်ပါဘူး။ ဒီလိုကောင်မလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) ချစ်သူအလုပ်များတဲ့အချိန်” ချစ်သူက ဖုန်းမဆက်တဲ့အခါတွေ၊ အလုပ်အရမ်းရှုပ်တဲ့အခါတွေမှာ ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေလို့ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီး၊ ရစ်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေပါ …။ အလုပ်တွေရှုပ်လို့ ပျာယာခတ်နေတဲ့ချစ်သူကို စိတ်ကောက်ပြီး ကသိကအောက်ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ချစ်သူကိုသနားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လွန်မှန်းသိပေမယ့် ဒီအကျင့်ကိုတော့ မပြင်နိုင်ကြပါဘူး …။ (၂) ဦးစားပေးခံချင်တယ်” သူတို့တွေဟာ အမြဲတမ်းဦးစားပေးခံချင်တဲ့သူတွေပါ။ တစ်လောကလုံးက ဘယ်သူနဲ့ယှဉ်ယှဉ်၊ ဘယ်လို အရာနဲ့ပဲ ယှဉ်ယှဉ် ချစ်သူအတွက် သူတို့က နံပတ်တစ်ဖြစ်ချင်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတလေ … Read more